Budata Abyssrium World APK maka Android
Budata Abyssrium World
Budata Abyssrium World,
A mara mma, sara mbara nke oke osimiri na-eche gị nokpuru ebili mmiri na World Abyssrium ọhụrụ. Mụbawanye iji hụ mpaghara ọhụụ, nke ọ bụla nwere isiokwu pụrụ iche, nwere agba ndị ezi uche dị na ya na ọnọdụ ihu igwe sara mbara. Jiri coral na ahịhịa mmiri na ihe ịchọ mma pụrụ iche iji mepụta oke osimiri anwansi gị.
Na-elekọta obodo gị nke na-emepụta ikuku ma na-eme ka ịdị ọcha dị elu ka azụ gị nwee ike ibi na oke osimiri dị ọcha. Ọ bụrụ na ịmee ebe dị ọcha ma dị mma ebe azụ na-ebi, ụdị azụ dị iche iche ga-abịa ileta. Nweta ndị enyi nwere ọ fishụ ga-azụtara gị ihe na ụwa Abyssrium.
Debanye aha ndị enyi gị negwuregwu ahụ iji leta ụwa dị nokpuru mmiri. Gosi ndi enyi gi ka ichoro uwa osimiri. Echefula iji ọnọdụ ikuku dijitalụ iji hụ ala mmiri gị mara mma na ndị enyi gị. Mepụta a pụrụ iche oké osimiri jupụtara mara mma coral na dị iche iche noké osimiri e kere eke!
Abyssrium World Ụdịdị
Mmepụta: Flero Games